Ultram : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 19/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Ultram ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ultram® (tramadol) ဟာနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုသက်သာစေတဲ့ ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းစေတတ်တဲ့ ဆေးဝါးအုပ်စုဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်နာကျင်မှုတွေကနေ ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုတွေအထိ Ultram® (tramadol) ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို၂၄နာရီ လျော့ပါးသက်သာစေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ Ultram® ER – ကြာရှည်စွာအာနိသင်ပြတဲ့ ဆေးပုံစံကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Ultram® ER ကိုနာမှထသောက်တာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။
Ultram® (tramadol) ကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသုံးစွဲရပါမယ်။ ဆေးညွှန်းအတိုင်းအတိအကျလိုက်နာပါ။ ဒီဆေးဟာအသက်ရှူခြင်းကို နှေးစေဒါမှမဟုတ်ရပ်သွားစေနိုင်ပါတယ် (အထူးသဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်သုံးစွဲချိန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲလိုက်ချိန်တွေမှာပေါ့)။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ပမာဏဒါမှမဟုတ်ကာလအတိုင်းအတာထက်ပိုမသုံးစွဲပါနဲ့။ သင့်နာကျင်မှုကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုရာမှာအာနိသင်ဆက်မပြတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရပါမယ်။ ပုံမှန် ဆေးပမာဏသုံးစွဲတယ်ဆိုရင်တောင် Tramadol ကိုစွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုတခြားလူတွေနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါဘူး (အထူးသဖြင့် ဆေးစွဲဖူးသူတွေ၊ဆေးတလွဲသုံးဖူးသူတွေနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါဘူး)။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကိုတလွဲသုံးရင်ဆေးစွဲခြင်း၊ဆေးလွန်ခြင်း၊အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် (အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲသုံးစွဲသူတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်)။Ultram® (tramadol) ကို ရောင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေကို ပေးပစ်ခြင်းဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။Ultram® (tramadol) ကိုစတင်သုံးစွဲပြီဆိုရင်အခြားသောအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအားလုံးကိုရပ်လိုက်ရပါမယ်။
Ultram® ကိုအစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊အစာမရှိသည်ဖြစ်စေသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးတခါသောက်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း နောက်အကြိမ်တွေမှာလည်းပုံသေ သောက်သုံးဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကြာရှည်စွာ အာနိသင်ပြတဲ့ ဆေးပြားကိုချိုးချေခြင်း၊ဖွင့်လိုက်ခြင်းများမပြုရပါဘူး။ အထဲက ဆေးမှုန့်တွေကိုရှူဖို့ဒါမှမဟုတ် အရည်တမျိုးမျိုးနဲ့ ရောပြီး သွေးကြောထဲထိုးထည့်ဖို့အတွက် Ultram® ဆေးပြားကိုချိုးချေခြင်းမပြုရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ရင် သေတတ်ပါတယ်။ ကြာရှည်စွာအာနိသင်ပြတဲ့ ဆေးပြားတွေကိုသုံးစွဲတဲ့အခါသင့်ဝမ်းထဲမှာ ဆေးပြား အပြင်ခွံပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးသင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးပမာဏဟာ လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။Ultram® ကိုကာလကြာရှည်သုံးစွဲလာပြီးရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်ထံ မေးမြန်းရပါမယ်။
Ultram® (tramadol) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Ultram® (tramadol) ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Ultram® (tramadol) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ultram® (tramadol) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းခြင်းတော့မပြုလုပ်ရပါ။
Ultram® (tramadol) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Ultram အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေခြင်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်၊နို့တိုက်ချိန်တွေမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပဲသုံးစွဲသင့်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော ဆေးဝါးတွေသုံးစွဲနေရခြင်း (ဆေးဝါးတွေဆိုရာမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)။
Ultracet® (acetaminophen and tramadol) ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေရှိနေရင် Ultram® ကိုမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ပြင်းထန်သောပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိနေခြင်း။
MAO inhibitor အုပ်စုဝင် ဆေးဝါးများကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းသုံးစွဲထားခြင်း (ဥပမာ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, or tranylcypromine)
အသက်၁၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ Ultram® ကိုမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။Ultram® ER ကိုအသက်၁၈နှစ်ကျော်မှသုံးစွဲရပါမယ်။ ပသိသို့မဟုတ်အဒီနွိုက်ဂလင်းတွေကိုမကြာသေးခင်ကမှ ဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားရတဲ့အသက်၁၈နှစ်အောက်ကလေး/လူငယ်တွေမှာ tramadol အသုံးမပြုရပါဘူး။
Ultram® သောက်သုံးသူအချို့မှာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ လေသင်တုန်းဖြတ်နိုင်ချေနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ဆရာဝန်ထံ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေရှိနေရင် လေသင်တုန်းဖြတ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
အချို့သောပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများသုံးစွဲနေရခြင်း၊မှိုစွဲရောဂါကု ဆေးဝါးများသုံးစွဲနေရခြင်း၊နှလုံးရောဂါကုဆေးများ၊သွေးကျဆေးများသုံးစွဲနေရခြင်း၊ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါကိုကုသနိုင်မယ့် ဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေရခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ultram ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင်စိတ်ချရမှုရှိမရှိကိုမသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Ultram ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပြင်ထခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ၊လည်ချောင်းစသည် ဖောင်းကားဖောရောင်လာခြင်းစတဲ့ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင်အရေးပေါ် ဆေးဝါးကုသမှုကိုအမြန်ဆုံးခံယူရပါမယ်။ အခြားသောစွဲလမ်းစေတတ်တဲ့ ဆေးများနည်းတူ Ultram® (tramadol) ဟာလည်းသင့်ရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကို နှေးစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူတာသိပ်အားနည်းလာရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ရှူနှေးလွန်းပြီးအချိန်အတန်ကြာရပ်ရပ်သွားတတ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်းပြာလာခြင်း၊အလွယ်တကူနှိုးမရတော့ခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ တွေ့ကြုံလာရပြီဆိုရင်တော့အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုခံယူရပါမယ်။
ကော်တီဇောပမာဏနည်းပါးခြင်း – ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ပိုမိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာခြင်း၊အားနည်းလာခြင်း။
ပြင်းထန်သောအရေပြားတုံ့ပြန်မှုများ – ဖျားနာခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊မျက်နှာသို့မဟုတ်လျှာ ဖောရောင်ဖောင်းကားလာခြင်း၊မျက်စိပူခြင်း၊အရေပြားနာကျင်ခြင်း၊အနီစက်/ခရမ်းရောင်အစက်များထွက်လာခြင်း (မျက်နှာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာအဓိကပျံ့နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်)။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ခြင်း၊အရည်ပြားကွာကျခြင်းတွေပါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
Serotonin syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပေါင်းစုရဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆေးဝါးကုသမှုအမြန်ဆုံးခံယူရပါမယ်။ အဆိုပါလက္ခဏာတွေကတော့စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊ကယောင်ကတမ်းများဖြစ်ခြင်း၊အဖျားတက်ခြင်း၊ချွေးစေးများပျံခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း၊အကြောလိုက်ခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမှ ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်းစတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊အဝလွန်သူတွေ၊အာဟာရချို့တဲ့သူတွေနဲ့မလှုပ်မရှားနိုင်သူတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုမိုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကိုကာလကြာရှည်စွဲသုံးမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားရော၊အမျိုးသမီးမှာပါ မြုံခြင်း၊မျိုးမအောင်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာယာယီလား၊အမြဲတမ်းအတွက်လားဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ အခြားဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Ultram နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ultram® (tramadol) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Ultram® (tramadol) နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
စွဲလမ်းစေတတ်သော ဆေးအမျိုးအစားများ – opioid အုပ်စုဝင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ရှိမှ သောက်ရမယ့် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ။
အိပ်ငိုက်စေတတ်သော ဆေးများသို့မဟုတ်အသက်ရှူနှေးစေသော ဆေးများ – အိပ်ဆေး၊ကြွက်သားပျော့ဆေး၊စိတ်ငြိမ်ဆေး၊စိတ်ရောဂါကု ဆေးဝါးများ။
သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ serotonin ပမာဏအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဆေးများ – စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေး၊ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အသုံးပြုသောဆေး၊မိုင်ဂရိန်းခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲသောဆေး၊ပြင်းထန်သောကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲသောဆေး၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုသောဆေးစသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ultram နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ultram® (tramadol) ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ultram နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ultram® (tramadol) ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကဒီဆေးနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတစုံတရာရှိခြင်း၊မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံရန်ကြံစည်ဖူးခြင်း။
အိပ်ဆေးများသုံးစွဲနေရခြင်း – ဥပမာ Valium (diazepam, alprazolam, lorazepam, Ativan, Klonopin, Restoril, Tranxene, Versed, Xanax, and others)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ultram ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အလျင်အမြန်အာနိသင်ပြသောပုံစံ : ၅၀ – ၁၀၀မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်အာနိသင်ကိုချက်ချင်းရရှိဖို့မလိုအပ်တဲ့လူနာတွေ (သာမန်နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ် ပြင်းထန်တဲ့ကာလတာရှည်နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေ)မှာဆိုရင်တော့ ဆေးဒါဏ်ခံနိုင်စေဖို့အတွက် ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကနဦးသုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏ : ၂၅မီလီဂရမ်ပမာဏကိုတနေ့တကြိမ်သုံးစွဲရပါမယ်။ သုံးရက်တခါ၂၅မီလီဂရမ်တိုးပေးသွားရမှာဖြစ်ပြီး၂၅မီလီဂရမ်ပမာဏကိုတနေ့လေးကြိမ်သုံးစွဲရမယ့်အနေအထားရောက်သည်အထိတိုးသွားရပါမယ်။ ဒီနောက်မှာတော့သုံးရက်တခါ၅၀မီလီဂရမ်တိုးပေးသွားရမှာဖြစ်ပြီး၅၀မီလီဂရမ်ပမာဏကိုတနေ့လေးကြိမ်သုံးစွဲရမယ့်အနေအထားရောက်သည်အထိတိုးသွားရပါမယ်။
ဆက်လက်သုံးစွဲသွားရမယ့်ပမာဏ : အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုတိုးတိုးသွားပြီးနောက်မှာတော့နာကျင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး၅၀ – ၁၀၀မီလီဂရမ်ပမာဏကို၄ – ၆နာရီခြားတခါသုံးစွဲသွားရပါမယ်။
ကြာရှည်စွာအာနိသင်ပြသော ဆေးပုံစံ :
ကနဦး ဆေးပမာဏ : ၁၀၀မီလီဂရမ်ပမာဏကိုတနေ့တကြိမ်သုံးစွဲရပါမယ်။
အာနိသင်ထက်မြက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး ဖြစ်စေဖို့အတွက်၅ရက်တခါ၁၀၀မီလီဂရမ်စီတိုးပေးသွားရပါမယ်။
အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
လျင်မြန်စွာအာနိသင်ပြသော ဆေးပုံစံကိုလက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့လူနာတွေအတွက်ကနဦးဆေးပမာဏ : ၂၄နာရီအတွင်းလိုအပ်တဲ့လျင်မြန်စွာအာနိသင်ပြသော ဆေးပမာဏကိုတွက်ထုတ်ပါ။ ဒီပမာဏကို နောက်ထပ်အနည်းဆုံး၁၀၀မီလီဂရမ်တိုးရမယ့်ပမာဏနဲ့စတင်သုံးစွဲပါ။ တနေ့ကိုတကြိမ်သောက်ရပါမယ်။
အခြားသော Opioid အုပ်စုဝင် ဆေးများကိုလက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့လူနာတွေအတွက်ကနဦးဆေးပမာဏ : အခြားသော Opioid အုပ်စုဝင် ဆေးများကိုဆက်မသောက်ပါနဲ့တော့။ ကာလကြာရှည်စွာအာနိသင်ပြတဲ့ ဆေးပုံစံကိုတနေ့လျှင်၁၀၀မီလီဂရမ်တကြိမ်ပမာဏနဲ့စတင်သုံးစွဲပါ။ အာနိသင်ထက်မြက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး ဖြစ်စေဖို့အတွက်၅ရက်တခါ၁၀၀မီလီဂရမ်စီတိုးပေးသွားရပါမယ်။
နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန် : အသက်၇၅နှစ်နှင့်အထက်လူနာတွေမှာအများဆုံးသုံးစွဲရမယ့်ပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကာလတာရှည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန် : အသက်၇၅နှစ်နှင့်အထက်လူနာတွေမှာအများဆုံးသုံးစွဲရမယ့်ပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Ultram ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Ultram® (tramadol) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ယံလွှာတထပ်ပါဝင်တဲ့ ဆေးပြား : tramadol hydrochloride ၅၀မီလီဂရမ်။
Ultram® (tramadol) ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ultram®. https://www.drugs.com/ultram.html. Accessed August 1, 2017
Ultram®. http://www.rxlist.com/ultram-drug.html. Accessed August 1, 2017